नियमित रुपमा नरिवलको तेल से’वन गर्नाले हुनेछ नसोचेको ला’भ , हेर्नुहोस ! – Gandaki Chhadke
नियमित रुपमा नरिवलको तेल से’वन गर्नाले हुनेछ नसोचेको ला’भ , हेर्नुहोस !
By गण्डकी छड्के Last updated Nov 25, 2020
एजेन्सी , आजकल सबैजना सुखी र स्वस्थ जीवनयापन गर्न चाहन्छन। स्वास्थ्य राम्रो बनाई राख्नका लागि खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले आफुले दैनिक खाने खानामा पौष्टिक तत्वयुक्त खाना खाने गर्नाले लामो समयसम्म स्वस्थ रहन सकिन्छ। दिनहु खानामा नरिवलको तेल मि’साएर खानुलाई ला’भदायक मान्ने गरिन्छ। नरिवलको तेल कपालको वृद्धि विकासका लागि उपयोगी छ। तर स्वास्थ्यका सन्दर्भमा भने खानामा यसको प्रयोगले कतिको फा’इदा पुर्याउछ त आउनुहोस एकै छिन चर्चा गरौँ।
१. नरिवलको तेलबाट बनेको खाना खानाले मे’टाबोलिज्म बलियो हुन्छ। मे’टाबोलिज्मले शरीरमा सहि तरिकाले काम गरेको खण्डमा यसले शरीरको अनावश्यक मो’टोपनलाई नियन्त्रण गर्न मदत गर्दछ। पे’टसंग सम्बन्धित स’मस्या भएकाहरुका लागि पनि नरिवलको तेलको से’वन अति नै ला’भदायी रहेको छ।२. दैनिक खाने खानामा नरिवलको तेल स’मावेश गर्दा शरीरमा रो’ग प्र’तिरोधात्मक क्षमतासंग ल’ड्न म’दत गर्दछ। जसले पेटमा भएका हा’निकारक कि’टाणुहरुबाट सु’रक्षा दिन्छ र पा’चन सम्बन्धि सम्पूर्ण स’मस्याहरूको स’माधानमा सहयोग समेत पुर्याउछ।
३. मुटुसंग सम्बन्धित बि’रामीहरुका लागि पनि यसले बिशेष प्रकारको भूमिका नि’र्वाह गर्दछ। नरिवलको तेलमा पाइने लारिक ए’सिडले शरीरमा को’लेस्टोरेलको मात्रामा वृद्धि गरि मुटुलाई त’न्दुरुस्त बनाईराख्नमा सहयोग गर्दछ। ४. नरिवलको तेलमा बनेको खाना खानाले ह’ड्डी तथा दाँत ब’लियो हुन्छ।अझ भन्ने हो भने यसमा पाइने म्या’ग्नेसियम र क्या’ल्सियमले शरीरको उपयुक्त ढंगबाट सु’रक्षा गर्न म’दत गर्दछ।
यी ४ चिज दान गर्दा व’रदान नभई अ’भिशाप मात्रै मिल्छ ! हेर्नुहोस् दान गर्न नहुने वस्तुहरु !
के संगै देखिदैछन आर्यन र सुहाना ?